Sidee qorsheynta waqtiga ay muhiim ugu tahay nolosheenna? – SOMA: Somali Media Association
Sidee qorsheynta waqtiga ay muhiim ugu tahay nolosheenna?
Qorshaynta ama nidaaminta waqtigu waa habka ama wadada u fududeysa qofka in uu waqtiga uu haysto uga faa’iidaysto si uu u gaaro ahdaafta uu higsanaayo.
Maaraynta Waqtiga waa hanaan aasaasi ah oo u baahan, la qabsasho, tababar, xirfad, iyo qaab shaqo oo isku xiran kuguna caawinaaya inaad qiimo badan siiso kor u qaadista tayada waqtiga noloshaada.
Muhiimada inaad waqtigaaga qaabaysaa micnaheedu maaha wax-qabad badan oo aad samayso, maxaa yeelay waxaa taas ka mudan inaad ku hawlan tahay tacab miro-dhal leh; in dadaaal kaagu ku wajahan yahay dhabbada saxada ah.
Dad badan caqabado kala duwan ayay kala kulmaan maareyn la’aanta waqtigooda, sida Caa’isha Cabdullaahi oo caqabad ka heysatay maareynta howlaha guriga iyo shaqadeeda.
‘‘Howlaha guriga ee aan qabto inta badan waxay i dhaafin jireen in aan aqristo cashirradeyda jaamacadda, sido kale baraha bulshada oo aan adeegsado waxaa dhacda in aan ku mashquulo”. Ayay tiri Caasha Cabdullahi.
Caa’isha Cabdullaahi waxay qorsheyneysaa hirgelinta jadwal waqti oo ay ku xisaabtanto si aysan uga welwelin waqti in uu ka lumo. Iyada oo ka hadleysana waxa ay tiri: ‘‘Labo toddobaad ka hor ayaan jadwal sameystay waxaana ku dhegsaday albaabka qolkeyga si aan ula socdo oo aanan u hilmaamin, waxyaabihii ii jadwaleysnaa ayaan ku dhaqaaqaa si aan u fuliyo, haddana waxaad moodaa in ay wax badan iska beddeleen xiligii aan jadwalka laheyn’’.
Waxaa jira in kale oo si maalinle ah ula nool jadwal waqtiyeysan sida Siidow Xaaji Maye.
‘‘Muddo ka badan seddex sanno ayaan ku dhaqmayaa jadwalkan, wuxuuna ka soo bilowdaa aroorta horre oo aan fuliyo qoddobo ii qoran sida inaan Jus qowlka Eebe aan Aqriyo, dabadeedna aan aado shaqadeyda, waxyaabaha ii qabsooma niyad ahaan waan bogaadiyaa, kuwii kale ee aan ii suuragelinna dib ayan ka qabtaa’’ ayuu yiri Siidow Xaaji Maye.
Howl sida ay u kala horreyso ayay mudnaanna u kala leedahay qabashadeeda, Cumar Nuux waa tababare nololeed, waxa uu bidhaaminayaa sida ay muhiim ugu tahay qofka maareynta waqtigiisa.
‘‘Marka aad leedahay jadwal waqtiyeysan waxaad si fudud ku gaari kartaa yoolalka aad leedahay, balse taa cagsigeeda waxay ku dhaxal siineysaa inaad ka qoomameyso waqtigii kaaga lumay dayacaadda, maareynta waqtiga waxa ay leedahay ahmiyad weyn waxay ka qeyb qaadaneysaa horumarka noloshaada’’ ayuu tilmaamay Cumar Nuux oo ah tababare nololeed.
Waxaa jira tabo iyo talaabooyin ay mudan tahay raacideeda si aad u sameysato jadwal waqti, balse tababare Cumar Nuux ayaa inoo tilmaamaya.
‘‘Howlaha labo ayay u qeybsamaan kuwo muhiim ah iyo kuwo deg-deg ah oo u baahan inaad sida ugu dhaqsiyaha badan ula falgasho, waxaa muhiim ah in aad xaliso howsha deg-degga ah, waxaadna iska ilaalisaa dib u dhigasho sababtoo ah, waxaa jira oraah dhaheysa howl maanta kuu taal dib ha u dhigan’’ ayuu yiri Cumar Nuux.
Inaad ka faa’iideysato waqtigaaga waxay kuu sahleysaa inaad xaqiijiso waxyaabaha aad rabto hirgelintooda, balse taa cagsigeeda waxay ku dhaxal siineysaa in aad u aaydo waqti kugu dhaafay waxyaabo aanan noloshaada waxba u tareyn mid adduun iyo mid aakhiroba.
W/Q: Maxamed-Qadar Cabdi Maxamed oo ka tirsan Radio Himilo.